Yuusuf Saxiixii Looga Waayey Afrika ma Lagaga Heli Doonaa UK
Faalladii SomaliTalk.com | April 26, 2008
Waxaa isku maalin (April 24, 2008) ka soo safray Afrika iyo Woqooyiga Ameerika madaxweynaha DGPL Gen. Cadde Muuse iyo madaxweynaha DFKMG col. Cabdillaahi Yuusuf si ay ugu kulmaan magaalada London ee dalka Ingriiska. Kulankaasi waxa uu dhacay Sabti April 26, 2008.
Wararka ugu horreeya ee ka soo baxaya kulanka col. Yuusuf iyo Gen. Cadde ee London ayaa tibaaxay in uu ku saabsanaa arrimo la xiriira Ammaanka Puntland iyo arrimaha Batroolka Puntland iyo shirkadaha heshiiska la galay DGPL. Waxaana wararku tibaaxeen in ay qorshaynayaan (Yuusuf & Cadde) in ay la kulmaan xubno ka socda shirkadaha sheegay in ay Batrool ka baarayaan Puntland oo hadda ku sugan London, gaar ahaan shirkadda Range.
col. Yuusuf iyo Gen. Cadde waxay April 24, 2008 ka duuleen Maraykanka iyo Afrika
si ay ugu kulmaan magaalada London ee dalka UK. Kulankaas oo dhacay 26/4/08
Warar laga helayo ilo wargal ayaa muujiyey in Gen. Cadde Muuse uu doonayo in C/laahi Yuusuf Axmed uu shirkadahaas u saxiixo heshiiska ay Puntland la gashay, inkasta oo col. Yuusuf uu arrintaas si cad u diidey dhawr jeer oo hore oo ay kulamo u dhex mareen.
Markii ugu horeysey oo uu saxiixaas diido waxay ahayd July 16, 2006 xilli uu C/laahi Yuusuf booqasho ku tegey magaalada Garoowe halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka socdey shirkadaha doonayey inay helaan saxiixiisa. Markii Yuusuf la kulmay xubnaha ka socdey shirkadda heshiiska sahaminta la gashay Puntland waxa uu weydiiyey in ay iyagu shidaalka sahamiyaan ama qodaan, markii ay ugu jawaabeen maya ee waxaan raadineynaa shirkado kale oo qoda, waxa uu ugu jawaabey annaguba waa raadsan karaa dallaaliin. Waxana Yuusuf uu markaas diidey in uu wax heshiis ah u saxiixo shirkadda Range Resources.
Xilligaas wixii ka dambeeyey dadka u dhow waxay sheegaan in col. Yuusuf uusan ku qanacsanayn heshiiska ay Puntland la gashay shirkadahaas.
Garoowe July 2006: C/laahi Yuusuf oo koox ka socotey Range u sharxayey
khariidada Somaaliya, gaar ahaan aagga Dooxada Nugaal iyo Dharoor....
Xilligaas C/laahi Yuusuf waa diidey in uu saxiix siiyo shirkaddaas...
April 12, 2008 ayey ahayd markii uu col. Cabdullaahi Yuusuf ka soo dhoofay Muqdisho oo uu gaarey Nairobi isagoo kusii jeeedey New York ee xarunta Qaramada Midoobey. Waxaa markaas garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi kaga horyimid Gen. Cadde Muuse oo isaguna habeenkaas (April 11, 2008) yimid Nairobi isagoo ka soo duulay Addis Ababa (oo uu tegey Maarso 30, 2008). Markaas waxaa kulan gaar ah dhex maray Col. Yuusuf iyo Gen. Cadde Muuse, kulankaas waxaa ilo wargal ah tibaaxeen in Yuusuf diidey in uu saxiixo heshiiska ay Puntland la gashay shiradaha Batroolka. [Waxaa xusid mudan in Gen. Cadde Muuse markii uu yimid Nairobi ka hor intii uusan la kulmin Yuusuf waxa uu la kulmay Cali Maxamed Geeddi.]
Kulankii Nairobi kaddib, col. C/laahi Yuusuf waxa uu u dhoofay New York, halka Gen. Cadde Muuse uu dib ugu laabtay Addis Ababa - markaas ayaa waftigii Addis Ababa la yimid ay ku laabteen Puntland balse Gen. Cadde waxa uu kusii negaadey Itoobiya ilaa uu ka aaday London oo ay markale ku kulmeen Yuusuf iyo Cadde Muuse.
Dhanka kale waxaa muran xooggan ooxagga sharciga ah uu ka dhex taagan yahay Baarlamaanka DGPL ee Garoowe iyo Baarlamaanka DFKMG ee Baydhabo - kun asaabsan cidda xaqa u leh in ay bixiso heshiisyada caalamiga ah. Arrintaas oo ayaa soo shaac baxday kaddib markii wareegto uu April 17, 2008 soo saaray Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DGPL, Axmed Cali Xaashi, uu ku muujiyey sida uu uga soo horjeedo waxa uu ugu yeeray "talo bixintii ka soo baxday Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ee DFKMG", Sh. Aaden Maxamed Nuur (Sh. Aaden Madoobe), "kuna saabsanayd sharciga Batroolka".
Sidoo kale waxaa xurguf xooggani u dhexaysaa wasiirka Macdanta iyo Tamarta ee DFKMG, Eng. Maxamuud Cali Saalax (Kaanje) oo dhinac ah iyo Gen. Cadde Muuse & wasiirkiisa batroolka oo dhinaca kale ah. Eng. Kaanje waxa uu si toos ah uga hor yimid heshiisyadii Puntland la gashay shirkadaha batroolka sahamiya, arrintaas oo ay DGPL ku tilmaantay hadal uu keligiis iska yiri oo aysan la qabin Col. Nuur Cadde iyo col. C/laahi Yuusuf. Eedayntaan Puntland waxa uu C/laahi Yuusuf kaga jawaabey aamusnaan. Sidoo kale waxaan arrintaas weli ka hadlin Ra'iisul wasaaraha xukuumadda FKMG oo Eng. Kaanje ka mid yahay golihiisa wasiirada. Waxaa jira siyaasiyiin rumaysan in Col. Nuur Cadde uusan ku dhiiran karin arrimaha Batroolka in uu ka hadlo waayo haddii uu ka soo horjeesto Puntland xaalku waxa uu noqon karaa in geeska lagu riixo sidii Geeddi - oo sababtii uu jagada isaga casiley ay asaas u ahayd Batroolka iyo shirkadaha heshiiska lala galay.
kulankii UN-ka ee: S/2008/186
Daawo (1) | Daaawo (2)
Arrimahaas oo jira ayaa waxaa muuqatey in Col. Yuusuf isagoo weli diidan saxiixa heshiiska Puntland iyo shirkadaha batroolka uu u dhoofay New York oo uu gaarey April 15, 2008, halkaas oo uu kaga qayb galay kulankii S/2008/186 ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo looga hadlayey Nabadda iyo Ammaanka Qaaradda Afrika.
Bilowga qormadan sida ku xusan, markii uu C/laahi Yuusuf ka soo dhoofayey New York (April 24, 2008) waxaa isla xilligaas Afrika ka soo dhoofay Gen. Cadde Muuse si uu C/laahi Yuusuf magaalada London ugu kulansiiyo shirkadaha heshiiska la galay Puntland. Kulankii hordhaca ahaa waxa uu April 26, 2008 London ku dhexmaray madaxweynaha DFKMG iyo madaxweyanaha DGPL. Waxaana la filayaa ayaga oo wada jira in ay la kulmaan xubno ka socda shirkadaha heshiiska la galay Puntland.
Haddaba, su'aashu waxay tahay C/Laahi Yuusuf Saxiixii Looga Waayey Garoowe iyo Nairobi ma Lagaga Heli Doonaa London oo ah meel ka durugsan qaaradda Afrika? - La arki doonee!
Dabayaaqadii bishii Maarso 2008 markii burburka dhaqaale la soo dersey shirkaddii dallaalka ahayd ee reer Australia (Opes Prime) ayaa waxaa soo shaac baxay shirkadaha iyo dadka xiriirka la leh shirkaddaas, kuwaas oo lugta la soo galay shirkadaha heshiiska la saxiixday DGPL.
Xubno ka socda "Janola Crest" oo jooga garoonka Garoowe
Sawirka sare waxa uu muujinayaa qaar kamid ah ciidmada booliska Puntland iyo dad reer Puntland ah oo la sawiran xubno ka socdey shirkadda Range Resources (April 2006). Joseph Obeid oo sawirka ugu xiga dhanka midig, waa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan, muddo dheerna degaana Australia, xillina ka soo shaqeeyey booliska Australia. Waxana uu ka mid yahay agaasimayaasha shirkadda Boss Energy, waxana uu tegey Puntland isagoo ah xoghaynta latalinta shirkadda Range Resources, sida ku cad qoraal ay Range faafisay April 20, 2006.
Joseph Obeid waxa kale oo uu maamule sare ka yahay shirkad lagu magacaabo "BodyGuard Security Services" ama "Australian Protective Securiy Group" taas oo sheegtay in sannadkii 2006 ay shirkad macdanta baarta (Range) u xilsaaratay in ay kala taliso xagga ammaanka. Waxaa shirkaddaas ka sii farcama shirkadda lagu magacaabo Janola Crest, taas oo ah tan tagtay Puntland, gaar ahaan Garoowe iyo goobaha lagu tababaro ciidanka booliska Puntland.
Agaasimaha shirkadda Range Resources, Michael Povey ayaa xaqiijiyey in Obeid uu Range ugu soo shaqeeyey Qandaraas ahaan, sida jariidadda The AGE faafisay April 11, 2008 .
Boss Energy oo uu Obeid [Cubeyd] agaasimaha ka yahay, waxay ka mid tahay shirkadaha ay saamanta ku burburkii dhaqaale ee Opes Prime.
Dadka la socda arrimaha la xiriira heshiiska ay DGPL la gashay shirkadaha sheegay in ay batrool ka baarayaan Puntland ayaa tibaaxay sababaha uu col. C/laahi Yuusuf saxiixa u diidey in ay la xiriirto isaga oo u arka in shirkadahaasi ay yihiin dallaaliin aan awood u lahayn in ay shidaal qodaan.
Soomaaliya: Markabkii Kalluumaysiga ee reer Spain oo Laga Bixiyey $1.2 million oo Madax Furasho ah...
Markabka reer Spain ee 'Playa de Bakio' oo April 20, 2008 lagu afduubay Xeebaha Soomaaliya waxaa la siidaayey April 26, 2008 kaddib markii laga bixiyey $1.2 million doolar oo madax furasho ah oo la siiyey burcaddii qafaalatay...
Markabka kalluumiysiga Tuunada ee laga leeyahay dalka Spain oo ay saarnaayeen 26 shaqaale ah oo laga afduubay xeebaha Soomaaliya ayaa la siidaayey Sabti April 26, 2008 kaddib markii laga bixiyey lacag madax furasho ah oo dhan $1.2 million doolar, sida laga soo xigtey madax Soomaaliyeed.
Markabka kalluumaysta Tuunada ee 'Playa de Bakio' waxaa Axad April 20, 2008 laga afduubay meel 200 miles u jirta xeebta Soomaaliya. Shaqaalaha markabkaasina waxay ka kooban yihiin 13 Spanish ah iyo 13 Africaan ah.
"Markabka waxaa la siidaayey 4 p.m galabnimo. Waxaana hay'adeheena sirdoonku noo sheegeen in burcadda la siiyey lacag dhan $1.2 million, waxaana (burcadda) lagu soo qaaday doon yar." Sidaas waxaa Reuters u sheegay Cabdisalaam Khaliif Axmed, guddoomiyaha dekedda Xarardheere.
"Waxaa kale oo aan fahamsanahay in burcaddu ay tageen tuulada Ceel-Huur, halkaas oo ay ka kireysteen gaari ka sii qaaday," ayuu yiri.
El-Hud (Ceel-Huur) waxay u dhowdahay Xarardheere, halkaas oo u dhow meesha Markabka Tuunada lagu qafaashay.
Markab kuwa ciidanka badda ee Spain, Mendez Nunez, ayaa loo diray aaggaas kaas oo markabka kalluumaysiga Tuunnada hadda usii galbinaya dhinaca jasiiradaha Siishelis [Seychelles].
Hay'adda wararka ee AP waxay sheegtay in ra'iisal wasaare xigeenka Spain, Maria Teresa Fernandez de la Vega, ay ka gaabsatay in markabka laga bixiyey madax furasho. Waxayna shir saxaafadeed ku sheegtay in markabka la siidaayey.
"Markabkii waa la siidaayey, burcaddiina waxay aadeen dhanka tuulada," sidaas waxaa yiri Cabdi Khaliif oo telefoon kula hadlay AP.
Markabka oo magaciisu yahay 'Playa de Bakio', dherer kiisuna yahay 250-foot [76 mitir] waa markab kalluumaysta kalluunka Tuunnada. Waxaana laga qafaashay xeebta Soomaaliya, halkaas oo lagu haystey muddo toddobaad ku dhow ilaa laga siidaayey kaddib markii sida Reuters sheegtay laga bixiyey lacag madax furasho ah.
Isha: Reuters, AP
Xeerarka badaha: [Dal kasta waxa uu xuquuq u leeyahay kalluunka iyo khayraadka ku jira badda dalkaas ilaa meel xeebta u jirta 212 nmi (nautical mile) ama 392 km. Tixraac: Xeerarka Badaha Adduunka.
Bulshada Caalamka oo ugu Baaqday Maamulka Puntland iyo Dadweynaha Inay Ka hadlaan Nabadgalyo la'aanta